Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा नेपाली युबतीद्वारा श्रीमानको ह*त्या
अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा नेपाली युबतीद्वारा श्रीमानको ह*त्या
सिड्नी, मङ्सिर ८ । सिड्नीको ग्रान्भिलमा नेपाली युबतीले श्रीमानको ह*त्या गरेको घटना सार्बजनिक भएको छ । नेपाली दम्पती श्रीमान-श्रीमातीको झगडा हुँदा श्रीमतीले धा*रि*लो ह’तियार प्रहार गरी श्रीमानको ह*त्या गरेको अष्ट्रेलियन प्रहरीलाई उदृत गर्दै सेभेन न्युजले जनाएको छ । ह*त्या आरोपमा उनकै श्रीमती पक्राउ परेकी छिन् ।
एनएसडब्लु प्र*हरी फोर्सले जारी गरेको विज्ञप्ती अनुसार उनलाई आज पारामाटा अदालतमा पेश गरिने तयारी छ । बुटवल स्थाई घर भएका मृ*तक युवकले ग्रान्भिलमै मोटर ग्यारेज संचालन गर्दै आएका थिए । युवक मिलानसार र सहयाेगी रहेकाे उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरुले बताएका छन् ।
मृत्यु हुने नेपाली युबा रहेको गैर आवासिय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाका उपाध्यक्ष देव गुरुङले पुष्टी गरेका छन् ।
शनिवार राती सिड्नीको ग्रान्भिलमा उनीहरुबिच झगडा भएको थियो । झगडामा उनीहरुबिच धा*रि*लो ह*तियार प्रयोग भएको अनुमान छ ।
टाउकोमा गम्भिर चोट लागेर अचेत बनेका युवालाई राति अवेर पारामेडिक्सले अस्पताल पुर्याएका थिए । ३४ वर्षे युवकको उपचारका क्रममा वेष्टमिड अस्पतालमा मृ*त्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनाकाे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेकाे जनाएको छ ।
अष्ट्रेलियाको नेपाली समाजमा अहिले घरेलु हिंसा प्रमुख समस्या बनेको छ । काम र पढाईको तनाव र कम उमेरमै नेपालमा बिबाह गरेर तथा कतिपयले नक्कली विबाह गरी अष्ट्रेलिया आउदा घरेलु हिंसाले प्रसय पाएको छ । पिआरका लागि अन्तिम तयारी गरिरहेका यी दम्पति, किन यस्तो अवस्थामा पुगे भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
मिस वर्ल्ड जिताउन सहयोग र सेयर गर्नुस नेपाली चेली अनुष्का श्रेष्ठको अपिल…
काठमाडौंं : आगामी डिसेम्बर*मा बेलायतमा हुन लागिरहेको मिसन वर्ल्ड प्रतियोगिता*मा नेपालको तर्फ*बाट मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ । मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता नजिकिएसँगै तयारीमा जुटिरहनु भएको श्रेष्ठले विश्वरी रहनु भएको सबैमा सहयोगको लागि आह्रवान गर्नुभएको छ । मिस वर्ल्ड अन्र्तगत शुरुमा मिस नेपाल श्रेष्ठ*लाई मिस वर्ल्डको मल्टी मिडिया अवार्ड जिताउन अर्थात टप २० भित्र पर्नको लागि सहयोगको आवश्यकता देखिएको छ ।
आउँदो डिसेम्बर मा हुन गइहेको मिस वल्र्ड २०१९ प्रतियोगिता*मा नेपालको तर्फ बाट मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठ*लाई मल्टीमिडिया अवार्ड जित्नको लागि लाईक र शेयरको आवश्यक पर्छ । जसको लागि MOBSTAR! एप्स डाउन लोड गर्नुपर्नेछ । एप्स डाउन लोड गरिसके पछि अनुष्का श्रेष्ठ सर्च गरि लाईक, शेयर गर्न सकिनेछ ।
जसले गर्दा भोट बढाउन सहयोग मिल्नेछ । यो जती धेरै लाईक अर्थात शेयर भयो त्यस*लाई पनि मल्टीमिडिया अवार्ड छनौटमा एक आधार मानीने गरेको छ । यसरी गर्न सकिन्छ एप्स डाउनडोल गरि लाईक तथा शेयर गर्नुस !
तपाईंलाई यो पोस्ट कस्तो लाग्यो ? तल कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला , मनपरे शे*यर गर्नुहोला । थप जानकारीको लागि हाम्रो वेब साइटमा जानुहोस धन्यवाद ।
प्रकाशित मिति November 24, 2019